Iphikiwe eyokuthi abakwa-SASSA angeke baholise ngo-January – LIVE Express
Iphikiwe eyokuthi abakwa-SASSA angeke baholise ngo-January
Inhlangano ebhekele izibonelelo zikahulumeni iSouth African Social Security Agency (SASSA) isithembise abantu abaholela izibonelelo zikahulumeni ukuthi amahhovisi ayo azobe evuliwe ngoDecember kodwa azovalwa kuphela ngamahodi.
“Ukukhokhwa kwezibonelelo zomphakathi kukaDecember kuyimanje kuyenziwa kanti uhlelo luzoqhubeka kuze kube umhlaka-15 December ezindaweni zokuhola zakwa-SASSA. Abahlomulayo, abasebenzisa ama-ATMs kanye nezitolo ukukhipha izibonelelo zabo, bangenzanjalo kuze kube ngumhlaka-22 December 2018,” kusho uSASSA wengeza ngokuthi lokhu kwenzelwe ukunika abahola izibonelelo ithuba lokuthengela kahle uKhisimusi kusenesikhathi.
FUNDA: U-SASSA uyaziqhelelanisa ‘nomncintiswano’ wabahola eyesibonelelo
Le nhlangano izwakalise ukukhathazeka ngalokho ekubize ngemibiko ngokunyuka kwezinga lokuqola kanye nemibiko engamanga neqondiswe kubantu abahola imali yesibonelelo.
Lokhu kuthiwa kulandela ukusabalala kwemibiko engamanga nebithi amahhovisi akwa-SASSA azovalwa ngo-December kanye nokuthi abahola imali yesibonelelo angeke bahole ngo-January.